Indlela ukupheka kakolweni groats "Artek"?
Kumelwe ukuba ngamunye kini ingane owazi ukunambitheka kakolweni wokudla. Kukholakala ukuthi lo mkhiqizo ngendlela emangalisayo ewusizo empilweni yethu. Lokhu iqolo iqukethe ezihlukahlukene amavithamini kanye izakhi trace ezidingekile ukusebenza evamile umzimba womuntu. Ngemva kokufunda isihloko lanamuhla, uzofunda indlela ukupheka kakolweni iphalishi "Artek" emanzini.
Incazelo emfushane futhi izinhlobonhlobo ekhona
Eqinisweni, akubona bonke uyazi ukuthi kubukeka kanjani lo mkhiqizo. Isikhathi esining impela kuba kudidaniswe ibhali groats. Ayikho into eyinqaba, ngoba zifana kakhulu ngokubukeka.
Kusukela isihloko kuyacaca ukuthi impahla eluhlaza for ukukhiqizwa okusanhlamvu cereal kwegolide emagobolondweni nokolweni okusanhlamvu. Ngesimo siphelile, lo iphalishi ubukeka ngempela mnandi. Ngakho-ke, ngomunye wabokuqala uvele yokudla komuntu. Labo abafuna ukuqonda ukuthi yenza kakolweni groats, kuyoba mnandi, ukuthi namuhla ukhiqiza izinhlobo eziningana lo mkhiqizo. Ahluke usayizi okusanhlamvu. Umhlangano omkhulu kunayo yonke kuthathwa njengesibikezelo esiyiso "Poltava", wakhe lincane "Artek" futhi "Arnautka", okungase obonwa ubhontshisi omhlophe.
Ukwakheka kanye nokusebenzisa umkhiqizo
Labo abafuna ukuqonda ukuthi yenza kakolweni groats, kufanele akhumbule ukuthi kumelwe nakanjani khona ekudleni abantu zokuphila esebenzayo noma abathintekayo emisebenzini yezandla kungakwenza akhathazayo. Lokhu iphalishi kubhekwa umthombo engokwemvelo amandla ukuze umzimba wethu futhi kusiza ukuqinisa amasosha omzimba. ukusetshenziswa njalo lo mkhiqizo kusiza ukumisa umsebenzi ebuchosheni futhi pheshana emathunjini.
Ukolweni oluthile lokudla kubhekwa siwumthombo omuhle kakhulu we-beta-carotene,, i-phosphorus, i-zinc nezesiliva. Ngaphezu kwalokho, 'ematisa umzimba vitamin E, amaprotheni ewusizo amafutha zemifino. Njengengxenye yalolu mkhiqizo biotin samanje, kusiza ukunciphisa imisipha ukukhathala ngemva kokuzivivinya okukhulu. Ngakho-ke, kutuswa ukukufaka ekudleni abadlali professional.
Ukolweni iphalishi, abilisiwe ngobisi, ungakwazi ngokushesha ukuthola ukusuka izinhlungu zokugula okungathí sina. eyikhulu amagremu umkhiqizo iqukethe kilojoule ezingamakhulu amathathu, ngakho ukudla kwasekuseni lokhu dish, uyosindisa unaphakade ubungqabavu sakho esiningi namandla.
Labo abazi kanjani yenza kakolweni groats "Artek", udinga ukukhumbula ukuthi kuyasiza ukunciphisa amazinga cholesterol, kanye nokususwa ubuthi elimazayo. Naphezu kweqiniso lokuthi kuba impela okusezingeni eliphezulu ikhalori wokudla, kuba isisekelo ukudla eziningi. Ngisho ingxenye encane umkhiqizo kalula digestible ematisa umzimba u-Adalberto isikhathi eside.
Ngaphambi ukupheka kakolweni wokudla, qiniseka ukuthi nawe ungadla lesi isidlo. Yena, njenganoma iyiphi enye umkhiqizo, kukhona eziningi Izimo. Lokhu iphalishi okumnandi kungavunyelwe ukusebenzisa kubantu abaphethwe asidi ongaphakeme futhi ukubuyisa. Kuyadingeka ukuba ngakususi kusukela ekudleni labo abanemizimba ezwelayo kutholakala ukuthi uphethwe yini kuze kube amaprotheni kakolweni gluten.
Abesifazane abakhulelwe kufanele nomkhawulo ukusetshenziswa kwalesi wokudla ngoba kungabangela ukukhiqizwa gas owengeziwe. Akumele udle kakolweni iphalishi abantu abasanda wahlinzwa ku izitho zangaphakathi.
Lokhu sommbila 80% isitashi. Lapho zifakwa emzimbeni womuntu into uguqulwe glucose. Ngakho-ke, kufanele kudliwe ngokuqapha kulabo zithambekele sikashukela.
Indlela ukupheka kakolweni iphalishi ngamanzi
iphalishi okuxekethile ewusizo esingazilungisa ngisho senkosikazi Ezifuna. Kuyinto ngokwanele ukuba banamathela olinganise Kunconywa. Ngakho uthola isidlo esihlwabusayo ngempela, kudingeka iqoqo izithako:
Amabili izingilazi zamanzi.
Okusanhlamvu kudingeka uthele epanini nigcwalise wona nge namanzi abandayo. Ilinde ketshezi amathumba, ukunciphisa umlilo. Ngemva kwalokho, i-usawoti kancane kungaba ikusasa isidlo.
Labo abazi kanjani yenza kakolweni groats, udinga ukukhumbula ukuthi yonke le nqubo kuzothatha imizuzu cishe abangamashumi amabili nanhlanu. Phakathi ukupheka, kubalulekile ngezikhathi ezithile ukuze bagqugquzele okuqukethwe pan kangangokuba hhayi wokushiswa. Uma amanzi ayahwamuka, kanye iphalishi wasala isigamu-kubhakwa, udinga uthele inani elincane lamanzi abilayo futhi uwulethe ukulungela. Ngaphambi sikhonza isidlo kufanele ugcwalise bhotela.
Ngo isidlo esiphelele, ungakwazi ukwengeza fresh amajikijolo, usinamoni, walnuts, uju, izithelo ezomisiwe noma omisiwe. Ayikho iphalishi kancane esihlwabusayo uzobe kulekelelwa inyama noma mushroom sauce. Lenza kahle cishe zonke ukudla.
Indlela ukupheka kakolweni iphalishi "Artek" phezu kwamanzi e multivarka?
Nale divayisi ungakwazi ngokushesha nakalula isidlo esihlwabusayo wabe esethi ithenda. Ukuze wenze lokhu uzodinga:
Amabili izinkomishi kakolweni.
Ucezu elincane ibhotela.
Four izinkomishi zamanzi ahlanzekile.
Endishini uthele oluthile lokudla Multivarki kudingeka, usigcwalisa amanzi kanye nosawoti. Khona-ke kudingeka uvule iyunithi. Indishi kumele ibhalwe "Krupa". Emva isignali umsindo ekupheleni ukupheka, engeza ukuba isitsha ibhotela uhlanganise "Ukushisa". Ngemva kwemizuzu eyishumi, iphalishi kungenziwa ukukhonzwa.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yenza kakolweni iphalishi phezu kwamanzi. amaswidi Okuxekethile kungenziwa kuphekwe ngendlela ehlukile. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha inkomishi kwesigamu ubisi omunye ingilazi yamanzi nokusanhlamvu. Ngaphezu kwalokho, ekhishini lakho kufanele kube kancane ibhotela, ushukela nosawoti.
Nge inqubo kulungiselelwa lokhu izitsha ewusizo futhi elula Ungasingatha umpheki ngisho hhayi onokuhlangabezanwe nakho. On umlilo kuyadingeka ukubeka ebhodweni amanzi, ushukela kanye nosawoti. Ngemva kwalokho kukhona olandela oluthile lokudla ubuthongo, elinde abilayo liquid, igesi kumele kungancipha. Ngemva ukuhwamuka ephelele amanzi embizeni kufanele uthele ubisi. Imizuzu eyishumi nanhlanu ngemuva iphalishi abilayo angasuswa plate, ugcwalise ngamafutha bese zisakazwa amapuleti. Uma kudingeka, kungase kube olunye uzilungiselele isidlo usawoti noma ezinoshukela.
Yini ukupheka kusuka amazambane eyodla? iseluleko Simple kanye zokupheka
Indlela ukupheka irayisi for roller
Ekhaya ukupheka Shawarma
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ewusizo: indlela ukupheka kanye zokupheka nabo
Indlela ukusika ingilazi ngaphandle ingilazi umsiki: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izindlela kanye nezincomo
Umculi Mexican Gabriel - Latin "Elvis"
Engagqwali ukudla: GOST. Indlela ukucacisa ukudla insimbi engagqwali? Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini ukudla engagqwali ubuchwepheshe?
Ihhotela Anita 3 * (Montenegro / Becici): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Erkal Resort Ihhotela 4 * (Kemer, Turkey) izithombe kanye nokubuyekeza
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini isabizwana Isiqalo ngesiRashiya? Ngokuvamile, izibonelo
Inthanethi "MGTS": ukubuyekezwa. Inthanethi "MGTS": yamanani
"Extreme Park" (Orenburg): amanani, kanjani
Izibuko nge nokwehlukana - kuyini? izibuko athuthukisiwe. Indlela hlola izibuko nokwehlukana